EcubWare 4.2.1 Manual - Jinhua Ecubmaker Technology Co., Ltd.
Boky fandidiana lozisialy
1.Sistialy fametrahana tontolo iainana sy fanombohana
1.1 Tontolo iainana mihazakazaka
1.2 Mametraka OpenGL
1.3 Mametraka Framework NET 3.5
1.4 Mametraka EcubWare
2.FDM 3D Fitaovana fanontana
2.1 Fampidirana ny interface
2.2 Menu Bar
2.3 Fitantanana ny mpanonta
2.3.1 EcubWare voalohany ampiasaina
2.3.2 Misafidiana mpanonta ao amin'ny Menu
2.4 Manafatra modely
2.4.1 Manafatra modely amin'ny Main Menu
2.4.2 Manafatra modely amin'ny Menu Menu
2.4.3 Manafatra modely amin'ny Mouse Drag
2.5 Model Parameter fametrahana
2.6 Fametrahana paramères amin'ny fanontana
2.6.1 Soso-kevitra voatondro
2.6.2 Fomba amam-panao
2.7 Manapaka sy mamonjy
2.8 Tombontsoa bokotra havanana
2,9 FDM Fandokoana 3D miloko tokana
2.10 FDM Fanontana 3D roa-loko 3D
3.Laser Engraving Function
3.1 Misokatra Laser Function avy amin'ny Menu
3.2 endrika sary tohanan'ny
3.3 Fampidirana ny interface
3.4 endrika sary tohanan'ny
3.5 Dingana iray amin'ny dingana fanondranana
3.6 Lisitra haingam-pandeha atolotra haingam-pandeha
4. Fomban'ny Carving CNC
4.1 Sokafy ny fiasan'ny CNC avy amin'ny Menu
4.2 Interface of the Function
4.3 Vector import
4.4 Ampidiro Bitmap
4.5 Import Gcode
4.6 Mamorona lahatsoratra ho an'ny fadin-tseranana
4.7 Mamorona endrika
4.8 Mamorona Embossed
4.9 Olana sy vahaolana
4.9.1 Tsy azo sokafana ny fisie Vector
4.9.2 Gcode novokarin'i Bitmap File Manana sisintany
5.1 Chinse amin'ny anglisy
5.2 Anglisy mankany Chinse
Ny "Ecubware" dia rindrambaiko misy fampiasa maro samihafa izay misy ny FDM 3D Pirinty natao, Laser Engraving Function ary ny asa sokitra CNC. Ny rakitra vokarin'ny rindrambaiko (*. Gcode) dia azo alaina ho an'ny maodely TOYDIY nataon'i EcubMaker, ny maodelin'ny fampiasana dia manana tombony amin'ny famindrana modules azo ampiasaina, ny hafainganam-pandeha haingana sy ny famokarana làlana mirindra, ary ny fiasa mahery vaika amin'ny fanaovana sary an-tsaina ny maodely 3d sy ny lalan'ny fitaovana.
Tontolo manodidina Windows: Windows 7 na ambony.
Fifandraisana amin'ny tambajotra: Ny tambajotra dia atoro
Karatra sary: Tohano OpenGL
OpenGL dia rindrambaiko fampielezam-peo fampiharana haino aman-jery cross-platform hananganana sary 2D sy 3D vector Graphics. Nampiasaina hanintonana seho telo-sarotra be pitsiny avy amin'ny primitives tsotra. Raha tsy misy“Opengl 2.0” na fiara ambony noho ny karatra graphique amin'ny solosain'ny mpampiasa, hisy fiantraikany amin'ny fanokafana sy fampiasana ny rindrambaiko EcubWare izany. Amin'ny ankapobeny, ny kinova fampirantiana fampisehoana default dia ambany kokoa aorian'ny fametrahana ny rafitra, toy ny aseho amin'ity sary manaraka ity.
Safidio ny adaptatera fampisehoana (fampisehoana default aorian'ny fametrahana ny rafitra: adaptatera fampisehoana fototra Microsoft)
Raha tsy misy ny mpamily OpenGL dia mitranga ity lesoka manaraka ity rehefa mihazakazaka rindrambaiko EcubWare.
Vaovao farany ny mpamily sary. Ity manaraka ity no fomba hamahana ny olana.
Afindra ny totozy ho "Hikaroka ao amin'ny tranonkala sy Windows"
Ampidiro ny "Device Manager"
Atsofohy ny "Device Manager"
Safidio ny "adaptatera aseho" sy "Microsoft Basic Display Adapter"
（Fampisehoana default aorian'ny fametrahana ny rafitra："Microsoft Basic Display Adapter"）
Tsindrio havanana hanatsarana ny mpamily
(Mila mifandray amin'ny Internet ny solosaina)
tsindrio "Mikaroha automatique ho an'ny rindrambaiko mpamily nohavaozina"
Mikaroka rindrambaiko amin'ny Internet ...
Fampidinana rindrambaiko mpamily aorian'ny nahitana azy
Mametraka rindrambaiko mpamily aorian'ny fisintomana
Nahomby ny fametrahana ary naseho ny anaran'ny karatra sary
Avy eo zahao raha misokatra tsara ilay rindrambaiko
Raha nosokafanao tsara dia voavaha ny olana. Raha tsy afaka nisokatra izy io dia angamba satria tsy manohana ny OpenGL na olana hafa momba ny fifanarahana ny karatra sary.
Raha tsy apetraka ny NET Framework 3.5 na ambony dia miakatra ireto bitsika manaraka ireto rehefa mihazakazaka ny Laser Function Software ianao , araka ny aseho etsy ambany
Ampidiro ny NET Framework 3.5 sy ambony amin'ny vahaolana 2: Rehefa mifandray amin'ny Internet ny solosainao, kitiho ny "Download ary apetraho ity endri-javatra ity" aseho amin'ny sary etsy ambony. Aorian'ny fipihana, hiseho ity satan'asa manaraka ity hatramin'ny faran'ny fametrahana.
Dingana 1: kitiho indroa ny fonosana fametrahana， Mametraha fakana sary ……
Hanamarina entana telo izy io, ny tsy fahombiazan'ny tsirairay dia hiteraka fiasa tsy ara-dalàna an'ny rindrambaiko EcubWare. Raha manamarina tsara dia azonao atao ny manindry ny "Dingana manaraka", na tsindrio "Skip Over" ho an'ny dingana manaraka.
Dingana 2: Aorian'ny fametrahana ny làlana, tsindrio ny manaraka
Dingana 3: kitiho manaraka
Dingana 4: safidio izay tianao hapetraka. Raha ity no fametrahana voalohany dia safidio ny safidy rehetra apetraka. Kitiho ny "Install"
Ny mpanonta lehibe ampiasaina amin'ity maodely ity dia misy ny TOYDIY 4in1 3D Printer（TOYDIY 4in1 FDM ToolHead / TOYDIY 4in1 FDM-Dual ToolHead),FANTASY PRO4 sy TOYDIY 4in1 3D Printer 2.0（TOYDIY 4in1 FDM ToolHead / TOYDIY 4in1 FDM-Dual ToolHead）
Ny interface indrindra dia misy ny "Menu Bar", "Parameter setting bar", "View Bar" ary "Model Parameter toolbar". Azonao atao ny manova ny mombamomba ny mpanonta ao amin'ny bara Menu ary manokatra ny fananganana manam-pahaizana. Ny faritry ny fari-paritra dia ny faritra miasa lehibe, izay idiran'ny mpampiasa ny masontsivana isan-karazany ilaina amin'ny fanapahana ary mamorona rakitra G-Code tsara kokoa mifototra amin'ireo masontsivana ireo. Ny faritra zahana dia ampiasaina hijerena maodely, hametrahana modely, maodelim-pitantanana, lalan'ny silaka mialoha, hijerena ny valin'ny silaka.
Ny fiasa dia ahitana indrindra ny fisokafana sy ny famonjena tahiry maodely, ny fari-pandrefesana, ny fametrahana modely, ny fanampiana sns.
Tamin'ny fotoana nisokafan'ny EcubWare voalohany dia niseho ny boaty fifanakalozan-kevitra "Add Printer". Araka ny aseho etsy ambany, safidio ny anaran'ilay mpanonta izay mifanaraka amin'ny lohatenin'ny fitaovana tadiavina. Ny default dia "TOYDIY 4in1 FDM ToolHead" (lohan-tsoratra FDM).
Sokafy ny interface software, ao amin'ny menio lehibe, "Add Printers", ampio ny mpanonta tianao.
Ny rindrambaiko dia manana fomba isan-karazany amin'ny fanafarana ny maodely, ny mpampiasa dia afaka misafidy ny manafatra modely arakaraka ny safidiny.
“File ”-” Open File (s) ”
Tadiavo ny bara eo amin'ny ilany havia an'ny rindrambaiko ，eo,
Modely manafatra. Azonao atao ny mandray maodely 3d amin'ny endrika isan-karazany, toy ny stl, obj, Dae, ary AMF. Na azonao atao ny mampiasa ny Load maodely rakitra avy amin'ny menio File, na afaka mampiasa CTRL + l. Ampidiro ny rakitra rameva, ary ny rindrambaiko dia afaka manisy fiovana kely amin'ilay maodely, toy ny fandikan-teny, ny fihodinana, ny fanaovana scaling, ny fitaratra.
Tsidiho ny tranonkala ofisialy. Misy fampahalalana azo alaina avy amin'ny pejy fandraisana.
Fampidinana modely. Ao amin'ny pejy, azonao atao ny misintona ny sasany *. modely modely amin'ny endrika * .STL
Raha manafatra modely iray dia tsindrio ilay modely voatahiry ao amin'ny solosainao ary sintomy ny modely ao amin'ny interface tsara an'ny EcubWare.
Ho fanatsarana ny valin'ny fanontana tonga lafatra, ny modely dia mila ahitsy amin'ny toerana sy ny habe mety. Afaka manao izany ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fampiasana ny "Model Parameter toolbar" ..Ity ny fomba fiasan'izy io：
Mifindra: Ny takelaka fisoratana eo amin'ny faritra ijerena dia ny faritra misy ny pirinty. Tsindrio ary tazomyKitendry totozy ankavia amin'ny zana-tsipìka ary mihetsika Up-Down, Havia-Havanana hametrahana indray ny maodelinao eo amin'ny lampihazo. Mampiasà gazety ary hazonyKitendry totozy ankavanana ahodina ny sehatra rehetra. modely azo apetraka na aiza na aiza faritra. AhodinaKodiarana totozy ny Zoom-In, Zoom-Out ilay maodely hahitanao ny fomba fijery amin'ny antsipiriany.
ambaratonga: Model Scaling Transformation, mametraha isan-jato isan-jato. Raha vantany vao voafantina ny maodely, kitiho ny bokotra Scale ary ho hitanao efamira telo amin'ny faritra maodelaly maneho ny famaky X, Y, ary Z. Kitiho ary sintomy boaty iray handrefesana ny maodely amina maromaro maromaro. Azonao atao koa ny mampiditra zoma zoom ao amin'ny boaty fampidirana zoom, ilay boaty eo ankavanan'ny "Scale *". Azonao atao koa ny mampiditra ny sanda haben'ny marina ao anaty boaty fampidirana Size, izay ilay boaty eo ankavanan'ny "Size *", hahazoana antoka fa fantatrao hoe iza amin'ireo refy no maneho ny maodely isaky ny mpiray. Ho fanampin'izay, mizara ho scaling"Scaling fanamiana" sy "scaling tsy fanamiana" , ny fampiasana default amin'ny Uniform scaling, izany hoe ny scaling menu amin'ny fanjakana hidin-trano. Raha hampiasa scaling tsy fanamiana dia tsindrio fotsiny ny hidin-trano. Ny scaling tsy mitovy fanamiana dia afaka mamadika goba ho kuboid. Reset dia hamerina ilay modely amin'ny endriny tany am-boalohany, ary To Max dia handanja ny maodely Ho an'ny habe farany ambony azon'ny mpanonta atao pirinty.
Ahodina: Tsindrio Ahodina, dia ho hitanao ny peratra telo eo ambonin'ilay maodely, mena sy maitso ary manga ny loko, maneho ny famaky X, Y, ary Z. Apetraho eo amin'ny peratra ny totozy, tsindrio havanana tsindrio ary sintomina dia afaka manamboatra ny maodely manodidina ny fihodinan'ny axis mifanaraka amin'ny zoro iray, ilaina ny manamarika fa mamela ireo mpampiasa hamily 15 isaky ny zoro fotsiny. Raha te hiverina amin'ny toerana voalohany ianao dia azonao atao ny manindry ny bokotra Avereno eo amin'ny menio Spin. Ny bokotra Lay flat dia mihodina mihodina ho azy amin'ny endriny misimisy kokoa eo ambany, ny bokotra Lay fa tsy manome fahombiazana isaky ny mandeha izany.
Mirror: Tsindrio ny zana-tsipìka efatra na sary masina roa hanehoana ny sary tany am-boalohany. Raha vantany vao voafantina ny maodely, kitiho ny bokotra Mirror mba hampisehoana ny maodely manaraka ny famaky X, Y, na Z. Ohatra, ny maodely ankavia dia azo alain-tahaka amin'ny maodely ankavanana.
Ny fizarana paramera pirinty dia mizara ho fari-paritra "Recommended" sy "Custom".
Ny "Recommended" dia azo takarina amin'ny toe-javatra fimailo Default. Ampidiro ny maodely ary ataovy ny fametrahana ny maodelin'ny modely ary kitiho ny "Slice" hanondranana ny Gcode. Tsy mila fanovana fanampiny amin'ny Print Setup anao. Ny rindrambaiko dia tsy misy fanjakana intsony.
Mba hisafidianana mpanonta, ny mpanonta ao amin'ny menio milatsaka dia tsy maintsy ampiana amin'ny alàlan'ny menio lehibe "Add Machine", raha tsy tsy haseho izany.
Material. Ny fitaovana default dia "PLA-T200". Samy hafa ny fananan'ny fitaovana samihafa. Raha te hanampy karazana material ianao dia azonao atao ny manindry, avy eo tsindrio ny "Material Management ...", manova vaovao vaovao, manova fampahalalana momba ny materialy, fanontana pirinty, sns.
：0,1 sy 0,2, fanontana effet printy, safidio amin'ny fisintomana ny teboka mainty amin'ny totozy. Ny isa dia maneho ny haavon'ny sosona tsirairay. Ny kely kokoa ny isa ao amin'ny safidy, ny finer ny pirinty, ary ny intsony ny fotoana fanontana. Amin'ny ankapobeny, 0,2, na 0,2 mm ny haavony, dia ny hafainganam-pandehan'ny fanontana haingana.
：Fenoy ny fametrahana. Tariho ny teboka mainty miaraka amin'ny totozy mba hahatratrarana ny haben'ny sanda. Apetraho ny tahan'ny famenoana mifanaraka amin'ny tena filàna, raha tsy ny fitondrana enta-mavesatra, ny tahan'ny famenoana 20%.
Alefaso ny gradient: raha azo atao, dia hitombo tsikelikely ny hakitroky ny famenoana rehefa mihabe ny haavon'ny pirinty.
: Ny fanoherana tsy ara-dalàna sasany dia mila tohanana mba hahitana vokatra tsara pirinty. Raha tsy ampiasaina dia hirodana ny protrusion. Ny fisafidianana azy dia hamorona rafitra fanohanana eo ambanin'ilay maodely hisorohana ny maodely tsy ho rendrika na hanonta amin'ny rivotra.
：Manisy faritra fisaka manodidina na ambanin'ny zavatra iray izay mety ho tapaka mora foana. Rehefa voamarina ity safidy ity dia alefa ny asan'ny Raft. Raha tsy voamarina izy dia tsy misy substrate. Ny fari-paritra manokana dia novaina ao amin'ny fizarana manaraka, "Print Parameter Settings.".
Ny lisitry ny masontsivana fanao, ny fampiasa tsy misy fangarony izay fatra ampiasaina matetika, ho an'ny toe-javatra fimaritana bebe kokoa, azafady tsindrio ireo masontsivana eo akaikin'ny bokotra bokotra kely, araka ny aseho amin'ity sary manaraka ity.
Misy bokotra "Slicing" eo amin'ny zoro ambany ankavanan'ny interface lehibe. Aorian'ny fametrahana ny mason-tsivana, ny hafatra momba ny satan'isa dia hampiseho ny "silaka", bokotra haingana. Milaza ny hoe "manapaka ..." raha mandeha, ary rehefa vita dia milaza aminao hoe ohatrinona ny fitaovana ho laninao, amin'ny metatra (m), ary amin'ny grama (G) fitaovana.
Rehefa avy manafatra ilay maodely ianao dia azonao atao ny manindry ilay maodely, ary avy eo tsindrio ny bokotra havanana totozy, pop-up function click-right, easy to operate the model. Ireto no fiasa:
Modely voafantina afovoany: Rehefa avy novaina ny modely, nitarina, navadika ary asa hafa, tsy voatery ho eo afovoan'ny lampihazo ilay maodely, kitiho ity safidy ity mba hampisehoana ilay ivon-toerana modely.
Hamafa ny maodely voafantina: Fafao ny maodely voafantina tamin'ny bokotra havian'ny totozy.
Modely voafantina marobe: Adikao ny maodely voafantina amin'ny bokotra havian'ny totozy.
Safidio ny maodely rehetra: Safidio ireo maodely hita eo amin'ny lampihazo. Hamafa ny takelaka fananganana: Ataovy foana ny maodely rehetra amin'ny sehatra pirinty.
Reload modely rehetra: Raha mamafa maodely tsy nahy eo amin'ny lampihazo ianao dia azonao atao ny mampiasa an'io endri-javatra io hamerenana amin'ny laoniny ilay maodely voafafa ary hampiseho azy io indray.
Modelin'ny vondrona: misafidiana maodely maromaro ho vondrona iray mba hiara-mihetsika sy scaling mora.
Hanambatra Modely: Manambatra modely roa mifampitohy ho iray, ny ankamaroany ho an'ny fanontana miloko roa. MODELY SPLIT: SPLIT Ilay maodely natambatra.
Amin'ny fanontana miloko tokana dia misy karazana fitaovana iray ihany amin'ny mpanonta, ary ny fanohanana na ny lampihazo dia miraikitra amin'ny fitaovana mitovy. Ireto ny dingana amin'ny fanapahana tapa-kazo tokana:
Dingana 1: Misafidiana mpanonta
Dingana 2: Ampidiro ny maodely
Dingana 3: Mametraha masontsivana raha toa ka tsy misy fepetra manokana, mety misy ny masontsivana fanonta default.
Dingana 4: manapaka sy manangona
Ny "Slicing" eo amin'ny zoro ambany ambany amin'ny rindrambaiko rindrambaiko, tapaho ny maodely, aorian'ny fikarakarana, kitiho ny "Save to File", ny rakitra GCODE novokarina dia hitahiry amin'ny kapila.
Dingana 3: Mametraha masontsivana
Safidio ny iray amin'ireo maodely ary kitiho ny bokotra "Extruder 1:"
Misafidiana iray amin'ireo maodely ary tsindrio ny bokotra "Extruder 2"
Dingana 4: atambaro ny maodely
Kitiho havanana mba hisafidianana ireo maodely rehetra
Tsindrio ankavanana ary safidio ny "Merge Model"
Tsindrio ilay maodely ary kitiho ny bokotra ankavanana mba hisafidianana ny "Model Selected Model"
Dingana 5: manapaka sy manangona
Amin'ny dingana teo aloha, kitiho ny "Slicing" eo amin'ny zoro ambany ankavanan'ny rindrambaiko, ary avy eo tsindrio "Save to File" raha tehirizina ny lalan'ny fanapahana vokatra mankany amin'ny disk
Select "Laser ToolHead"
Select ”ENY” hanokatra EcubMakerLaser
Sary notohanan'ity rindrambaiko ity dia: *. BMP, *. JPG, *. PNG.
①：Menu lehibe. "File" ny menio dia misy ny manafatra rakitra sary, manokatra fisie fisokafana farany ary mitahiry 'Gcode'; "Fiteny" azo avadika eo anelanelan'ny Sinoa sy Anglisy, ary avereno aorina aorian'ny famindrana; "Extra" mizara mizara ho "fanampiana an-tserasera," tranonkala ofisialy "ary" sub-menu ".
Bicubic avo lenta: Mety ho an'ny fanitarana sy fihenam-bidy, mamokatra sary piksela interpolating pixel.
Mpifanolo-bodirindrina akaiky indrindra: Tehirizo ny sisiny henjana manaparitaka ny sary nefa tsy manatsara pixel.
Slides scales sy RGB. Raha manokatra sary miloko ianao dia ilaina ny fanovana avy amin'ny loko ka hatramin'ny grayscale. Azonao atao ny misafidy eo amin'ny loko efa voafaritra hatramin'ny grayscale formula (Simple Average, Weight Average na Optical Straect) na misafidy ny safidy "Custom" ary mamaritra ny tanana ny fifehezana ny singa RGB tsirairay.
tamin'ny fototra HQ Bicubic Mpifanolo-bodirindrina akaiky indrindra
“fanao”Dia mahasoa rehefa manafatra sary sary toa ny clipart, ary tianay ny hifehezana ny haizina / hazavana amin'ny lokon'ny tsirairay.
Varavarana mamirapiratra, mifanohitra ary BW. Amin'ny famirapiratana sy ny fifanoherana dia azonao atao ny manamaizina na manamaivana ny sary, ary koa mampitombo ny fifanoherana.
Amin'ny safidy BW dia azonao atao ny mampihetsika ny tokonam-baravarana: ny piksela mamiratra kokoa amin'ny tokonam-baravarana dia hoheverina ho fotsy, ho tonga mainty ny maizina.
Ireo safidy rehetra ireo dia misy fiatraikany amin'ny fomba fikirakiran'ireo fitaovana isan-karazany ny sary sy hamokarany ny vokatra farany. Satria samy hafa ny fitondran-tenan'ny fitaovana samihafa rehefa voasokitra amin'ny laser izy ireo, ilaina ny milalao amin'ireo safidy ireo hahitana ny fitambarana tsara indrindra ho an'ny vokatra irina.
③：Miaraka amin'ny "andalana mankany andalana" fitaovana azonao atao sokitra sary avo lenta miaraka amin'ny alokaloka volondavenona. Mariho fa tsy ny fitaovana sokitra rehetra no mifanaraka amin'ity fizotrany ity: ny fitaovana sasany dia tsy misy ifandraisany amin'ny faritry ny herin'ny laser fa misy izy ireo raha tsy may na tsy may may ka manahirana ny mamokatra grayscale. Amin'ireo tranga ireo dia manoro hevitra izahay hampiasa Fitaovana "mandavaka".
④：Ny torolàlana momba ny sokitra laser dia azo fidina mitsivalana, lava ary lava. Arakaraka ny maha-lehibe ny sanda kalitao no ahazoana isa bebe kokoa ary mora kokoa ny mampiasa karbaona. Noho izany, ny soatoavina samihafa dia azo apetraka arakaraka ny fitaovana samihafa. Amin'ny ankapobeny, ny soatoavina natolotra dia 10 andalana / mm ary 5 andalana / mm ho an'ny akora hazo.
⑤：Apetraho ny hafainganan'ny sary sokitra sy ny haben'ny sary. Ny hafainganan'ny sokitra dia manodidina ny 300, izay azo ahitsy koa arakaraka ny tena refesina. Ny sakany sy ny hahavony dia maneho ny haben'ny sary sokitra.
：Manomeza 90 ° famantaranandro ：Manomeza 90 ° isaky ny famantaranandro
：Mametaka ny sary Atsimbadika ：Atsimbadika ny sary
：Sary voly ：Inver Color
：Avereno ny fanovana rehetra
⑦Preview amin'ny sokitra laser: Ny vokany tsara dia hafa kely amin'ny zava-misy. Sary tany am-boalohany: sary tany am-boalohany nafarana
⑧：Faritra fampisehoana sary
⑨Manafatra: manafatra sary fisie; Slice: ovao ny sary ho rakitra gcode eken'ny masinina; Tehirizo: Tehirizo toy ny rakitra gcode.
Bitmaps: * .bmp, *. Png, *. Gif ary * .jpg
Kisary Vector (manatsara): * .svg
Mametraka ny masontsivana momba ny sokitra：
Anisan-dry zareo: "Quality" Ny teboka matevina dia, ny lehibe kokoa ny sandany, ny matevina ny fampisehoana, ary ny sandan'ny mason-tsivana dia 10.
Hafainganan'ny rivotra. Maneho ny hafainganam-pandehan'ny lohan'ny laser amin'ny faritra tsy misy sary sokitra an'ny sary.
Hafainganana sokitra: Maneho ny hafainganam-pandehan'ny lohan'ny laser ao amin'ilay faritra voasokitra. Ny soatoavina omena ny fitaovana miverimberina dia tsy tokony ho avo loatra.
Miteraka rakitra fisokirana：
Hafainganana sokitra (mm / min)
Quality (tsipika / m)
Ity rindrambaiko ity dia ampiasaina amin'ny famolavolana rindrambaiko modely TOYDIY novokarin'i Ecubmaker. Fanohanana hanafarana sarintany vector, bitmap, preview Gcode.
Select ”CNC ToolHead "
Select ”ENY” hanokatra EcubMakerCNC
①：Bokotra misokatra fisokafana. Tabilao Vector dia manohana ny fisokafan'ny "*. SVG", "DXF". Ny rakitra Bitmap dia manohana ny "*. JPG", "*. JPEG" *. BMP "," *. GIF "," *. PNG ".
②：Mamorona sary. Afaka mamorona lahatsoratra sy endrika tsotra ianao.
③：Zomy ny sary. Raha x sy y lehibe kokoa noho ny 180mm ary ivelan'ny elanelana amin'ilay lampihazo dia mampiseho fampitandremana mena ny haben'ny sary.
④：Ahodino ny endrika. Izy io dia manohana ny 90 ° amin'ny famantaranandro, 90 ° manohitra ny famantaranandro, miolakolaka, fitaratra marindrano ary fitaratra mitsangana.
⑤：Famaritana parameter. Apetraho ny hafainganan'ny sokitra, ny halalin'ny sokitra ary ny haavon'ny Z rehefa vita ny sokitra. Aorian'ny fametrahana dia avereno indray ilay rindrambaiko hahomby. Misy vokany eo amin'ny vokatry ny sary sokitra ny hafainganam-pandehan'ny sary sokitra. Ny hafainganam-pandehan'ny sary sokitra samihafa dia azo apetraka amin'ny fomba hafa. Amin'ny ankapobeny, ny kely kokoa, ny tsara kokoa, fa ny intsony ny fotoana sokitra.
⑥：Ho an'ny fampisehoana làlana poakaty, ity safidy ity dia tsy maintsy voamarina rehefa manafatra sy mitahiry ny sary, raha tsy izany dia tsy marina ny sokitra.
⑦：Faritra fampisehoana sary. Ny faritra mialoha.
Ireo endrika sary sokajy vector dia 1. SVG sy *. DXF, fa tsy ny kisarisary vector rehetra tohanana dia azo sokafana. Ampirisihina hampiasa *. Fisie DXF.
Fanamarihana: Amin'ny ankapobeny, ny endrika bitmap rehetra tohanana dia azo sokafana, fa ny bitmaps sasany kosa misy sisintany manodidina azy ireo aorian'ny ampidiriny ao anaty rindrambaiko.
Ampidiro ny lahatsoratra noforonina ity rindrambaiko ity dia tsy manohana ny fiasan'ny famoronana fanampiana, fa manome fitaovana hamoronana fanamaivanana, izany hoe ny fusion360 an'ny orinasa Autodesk. Raha mila tsipiriany, azafady mba jereo ny "fusion360 mamorona adiresy fampidinana fanampiana" sy "fusion360 mamorona tutorial fanampiana".
A. Olana amin'ny sary (loko misy ny tsipika, voahidy, sns.)
B. Olana amin'ny famoronana rakitra vector.
Amin'ny ankapobeny dia misy ny olan'ny bitmap na olana amin'ny loko.
A. Hamarino raha voamarina ny safidy fampisehoana lalana.
B. Fitsapana ny *. Fisie format SVG miaraka amin'ny rindrambaiko manafatra. Raha afaka manafatra ilay sary namboarina indray ianao.
5. Fanovana fiteny
Atsaharo ny rindrambaiko